inguqulelo 0.3.6 – Ndigocagoce ukuba unako
EtiMnga 2, 2009 ngokuthi umnikelo Shiya Comment
Le nguqulelo ingeza umsebenzi omhle kakhulu, yaye sithemba izikhundla nokuba ngcono xa kuthelekiswa izisombululo ezizezinye. Oku uyakwazi ukwenza ukhangelo ngolwimi eliguqulelwe kumaphepha eliguqulelwe. Ngoko umxholo wakho iguqulelwe iba kakhulu ziyafumaneka kubasebenzisi bakho.
Kwakhona kakhulu kwaphucula RSS inkxaso kulo nguqulo, yaye ngoku iquka kwi RSS ukunxulumanisa ngokufanelekileyo ulwimi oluchanekileyo. Singathanda ukubulela datapharmer uncedo lwakhe nale. Ndingathanda ukuqaphela, ngokuba bonke abasebenzisi isicelo google sitemaps nokuhlanganiswa, ukuba RSS i umthombo olungileyo sitemaps kwisiza google, ukuze ungadibanisa RSS yakho entsha uyawondla izimvo feeds google sibe ukubonakala ngcono.
inakho Last amancinci, nathi ngoku kananjalo ziguquka ukuthumela amaqhosha uhlobo (kuhle ukuba ifomu search the).
Siyathemba ukuba nakuwuvuyela olu guqulelo – ukuba kukho into ethe yaphukile, amazwana nje apha, kwaye sicela – sebenzisa i mail sikwazi ukuphendula, kungenjalo asikwazi ukuba sibuyele kuwe, leyo is a shame…
Ideas, bugs, iindumiso ukuba usoloko elamkela.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: engephi, khulula, ukufuna, Java Wordpress